Waa maxay VPN? Sideed Ku Xulataa Mid? | Martech Zone
Muddo sanado ah, waxaan u maleeyay in xafiis yeelashadu ay tahay maalgashi wanaagsan… waxay macaamiishayda siisay dareen ah in ganacsigeygu xasilloon yahay oo guuleysto, waxay siisay shaqaalahayga iyo qandaraasleyda meel dhexe, waxayna ii ahayd sharaf ii ah.
Xaqiiqdu waxay ahayd in macaamiishaydu aysan soo booqan xafiiska oo, markii aan hoos u dhigay liiskayga macmiilka oo aan kordhiyay wax-soo-saarkii mid walba, waxaan ahaa mid aad iyo aad u badan goobta oo xafiiskaygu wuxuu fadhiistay faaruqin waqtiga intiisa badan. Taasi waxay ahayd kharash aad u badan space xafiiska xafiisku aad buu uga qaalisan yahay amaahda guryaha.
Hadda waxaan ka shaqeeyaa inta u dhexeysa xarumaha wada shaqeynta, garoomada diyaaradaha, hoteelada, goobaha lagu qaxweeyo, iyo goobta aan la joogo macaamiishayda. Mid ka mid ah macaamiishayda ayaa xitaa i siiyay idaacad aan ku shaqeeyo.
In kasta oo macaamiishaydu ay ilaalinayaan shabakad caafimaad leh oo ka xiran dadweynaha, taasi maahan mid la mid ah meelaha ay ka shaqeeyaan iyo makhaayadaha kafeega. Xaqiiqdu waxay tahay in inta badan shabakadahaas la wadaago ay u furan yihiin quudhsiga. Aqoonsiga iyo hantida aqooneed ee aan u shaqeeyo maalinba maalinta ka dambaysa, si fudud ugama dhigi karo khatar isgaarsiintaydu inay u furan tahay dadweynaha. Taasi waa meesha Xiriirinta Gawaarida Gaarka ah ciyaarta ayaa timaada.
A VPN, ama shabakad khaas ah oo wata, waa tunel ammaan ah oo u dhexeeya qalabkaaga iyo internetka. VPN-yada waxaa loo isticmaalaa in laga ilaaliyo taraafikadaada internetka kayimidda, faragelinta, iyo faaf-reebka. VPNs sidoo kale waxay u shaqeyn karaan wakiil ahaan, waxay kuu oggolaaneysaa inaad qariso ama beddesho goobtaada oo aad ka baarto shabakadda si qarsoodi ah meel kasta oo aad rabto.
Wixii faahfaahin ah oo ku saabsan socodsiinta waxa VPN yahay, waxaad sidoo kale u baahan kartaa inaad iska hubiso casharka is-dhexgalka ee Surfshark, Waa maxay VPN?
Maxay u isticmaali VPN?
Adiga oo hubinaya in dhamaan isgaarsiintaada internetka ay labaduba yihiin kuwo sir ah oo la jaan qaadaya meelaha kale, waxaa jira faa iidooyin badan oo laga helayo a Shabakadda Gaarka ah ee Khaaska ah:
Qari IP-gaaga iyo goobtaada - Adeegso VPN si aad uga qariso cinwaankaaga IP-ga iyo meesha aad ku sugan tahay goobaha la geynayo iyo kuwa wax jabsada.
Qari xiriirintaada - VPN-yada wanaagsan waxay adeegsadaan sir adag 256-bit si loo ilaaliyo xogtaada. Ka daadi goobaha Wi-Fi sida garoonada diyaaradaha iyo makhaayadaha adigoo garanaya furahaaga sirta ah, emaylkaaga, sawiradaada, xogta bangigaaga iyo macluumaadka kale ee xasaasiga ah lama dhex geli karo.
Ka daawo waxyaabaha ku jira meel kasta - Ku qulquli dhammaan bandhigyadaada iyo filimadaada HD-holly-fast HD qalab kasta. Waxaan ku hagaajinay shabakadeena si aan u siino xawaaraha ugu sareeya oo aan laheyn xadka xadka ballaadhinta. Wax walba ku soo dejiso ilbiriqsiyo, oo ku sheekeysi fiidiyow leh keyd yar.
Ka jooji boggaga internetka ee faafreebka lagu sameeyo - Si fudud u furi boggaga iyo adeegyada sida Facebook, Twitter, Skype, Youtube, iyo Gmail. Hel waxa aad rabto, xitaa haddii laguu sheego in aan laga heli karin waddankaaga, ama haddii aad ku jirto shabakad iskuul ama xafiis oo xaddidaya marin u helka.
Wax dabagal ah ma jiro - Jooji quusashada dawladaha, maamulayaasha shabakadda, iyo ISP-gaagu.
Majiro bartilmaameed juquraafi ah - Adoo qarinaya cinwaankaaga IP-ga iyo goobta, ExpressVPN waxay ku adkeyneysaa boggaga iyo adeegyadu inay ka qaadaan qiimo sare ama soo bandhigaan xayeysiis bartilmaameed ku saleysan goobta. Iska ilaali inaad lacag saa'id ah ka bixiso fasax ama amar toos ah.
Sababtoo ah VPN wuxuu qariyaa cinwaankayga IP-ga iyo goobta, sidoo kale wuxuu i siiyaa hab fiican oo aan ku tijaabiyo boggaga macaamiishayda si aan u hubiyo in soo-booqdayaasha aan la garanayn ay helayaan khibradda isticmaale ee ku habboon.
Sida loo Xulo VPN
Dhammaan adeegyada Shabakadda Khaaska ah ee Virtual-ka looma abuurin siman. Waxaa jira dhowr sababood oo midba midka kale looga doorto. Iyada oo boqolaal bixiyeyaal kala duwan ah, akhriska a Dib u eegista Tunnelbear iyo doorashada midda saxda ah waxay ka dhigan tahay in la gaaro isku dheelitirka saxda ah ee u dhexeeya adeegyada, sahlanaanta isticmaalka iyo qiimaha.
Goobaha Juqraafiyeed - Markaad gasho internetka adoo adeegsanaya VPN, dhammaan xirmooyinka xogta ee ka imanaya server fog ee kombuyuutarkaaga ama aaladda mobilada waa inay ka gudbaan server-yadaada VPN bixiyaha. Waxqabadka ugu sarreeya, u dooro VPN kumbuyuutarrada leh server-yada adduunka oo idil. Dabcan, ballanqaadyada VPN ee ku saabsan gaadhista adduunka ma dammaanad qaadayo waxqabad aad u fiican, laakiin waa calaamad muhiim ah in kaabayaasha adeeg bixiyayaashu ay horumarsan yihiin oo awood u leeyihiin inay soo bandhigaan waxqabad sare.
bandwidth - Inta badan ganacsiyada shirkaddu waxay bixiyaan gudaha gudaha VPN. Haddii ay haystaan ​​baaxad ballaadhan, taasi waa wax cajiib ah. Si kastaba ha noqotee, la shaqeynta VPN aan lahayn awood ayaa gaabineysa qof kasta oo ku xiran gurguurta.
Taakuleynta Mobilada - Qaabeynta VPN waxay ahaan jirtay waxoogaa xanuun ah, laakiin nidaamyada hawlgalka casriga ahi waxay isku dhafan yihiin awoodaha VPN. Hubso inaad la shaqeyneyso adeegga VPN oo leh awood desktop iyo mobiil labadaba.
Qarsoodiga - Waa inaad markasta ogaataa si hubaal ah in adeeg bixiyahaagu aanu u ururin ama ula wadaagin macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed isla markaana aanu ula socon dhaqdhaqaaqaaga. Maskaxda ku hay in ballanqaadka sirta buuxda iyo joornaalada eber aysan macnaheedu ahayn inay u dhacdo si hubaal ah. Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, waxaa jiray fadeexado dhowr ah oo ku saabsan shabakadda. Waxaa lagugula talinayaa inaad ka doorato VPN kombiyuutarka adeeg bixiye xarunteedu tahay Yurub iyo Ameerika midna.
Speed - VPN-yada sare waxay ilaaliyaan asturnaantaada, laakiin waxay kuu ogolaanayaan inaad kusii wado waxa aad jeceshahay khadka tooska ah, oo ay kujiraan daawashada fiidiyowyo tayo sare leh, ciyaarida ciyaaraha internetka, daalacashada shabakada, iyo inaad waxbadan ka barato guulaha farsamada. Ha aaminin xayaysiisyada. Had iyo jeer hubi dib u eegista internetka oo samee tijaabooyinkaaga. Markaad tijaabinaysid adeegga VPN xawaaraha kombiyuutarka, samee dhowr tijaabo waqtiyo kala duwan oo maalinta ah.
Price - Waa inaad u diyaar garowdaa inaad xoogaa lacag ah ku bixiso si aad u isticmaasho midka ugu fiican VPN. Adeegyada bilaashka ah ayaa ku habboonaan kara hal-mar, laakiin wax badan ayey u baahan yihiin haddii maalin walba la isticmaalo. VPN-yada bilaashka ah ee kombiyuutarada Windows iyo Mac badanaa waxay leeyihiin xadidad taraafikada ama xawaaraha. Warka fiicani wuxuu yahay inta badan VPN bixiyeyaasha kombiyuutarada ayaa kuu oggolaanaya inaad tijaabiso adeegga, qiimeyso waxqabadkiisa, haddii wax qaldamaanna, waxaad heli doontaa lacag celin.
Macaamiisha iyo dib u eegista xirfadeed ayaa faa'iido yeelan kara marka la kala dooranayo dhawr dalab oo aad isugu dhow. Qaar ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee go'aamiya in adeegga VPN uu wanaagsan yahay ama xun yahay ayaa muuqan kara oo keliya dhowr toddobaad iyo bilo la isticmaalo ka dib. Raadi faa iidooyinka iyo qasaaraha, oo dhaliil. Ma jiro 100% adeeg dhammaystiran, laakiin wali waa inaad doorataa midka ugu habboon maxaa yeelay VPNs ayaa ah tikniyoolajiyadda mustaqbalka.
Waxaan doortay ExpressVPN maxaa yeelay waxay leedahay 160 goobood oo adeegaha ah oo ku baahsan 94 dal, waxay isticmaashaa 256-bit encryption, waxay leedahay barnaamijyo hagaajinaya goobtaada, waxayna leedahay qiimeyn iyo taageero weyn. Isla marka aan furo Mac-keyga ama aan ku xirnaado shabakad ku jirta iPhone-kayga, waxaan arkaa VPN isku xidha oo waan kacayaa oo waan socdaa! Ma aha inaan sameeyo wax aan ku hagaajiyo ama ku xiro wakhti kasta… waa iswada.
Ku hel 30 Maalmood Bilaash ExpressVPN
Shaacinta: Waxaan helayaa 30 maalmood oo bilaash ah ExpressVPN qof kasta oo isqoriya.
Tags: ExpressVPNshark sharktunnelbearshabakad khaas ah oo wataVPNwaxawaa maxay vpn